Saddex qof oo ku dhaawacantay qaraxii Muqdisho ka dhacay. - Wargeyska Faafiye
Saddex qof oo ku dhaawacantay qaraxii Muqdisho ka dhacay.
Saddex qof ayaa ku dhaawacantay qarax loo adeegsaday gaari laga buuxiyay waxyaabaha qarxa oo maanta ka dhacay dhabarka dambe ee hoteelka Maka Al-Mukarama ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Dad goob-joogeyaal ah ayaa sheegay in askari ka mid ah ilaalada hoteelka uu ku jiro dadka dhaawacmay.
Lama oga cidda lala beegsanayay qaraxa, iyadoo firirkiisa uu gaaray dhul ballaaran. Taliyaha ciidamada booliiska degmada Hodan ee magaalada Muqdisho Maxamed Daahir oo la hadlay Bar-kulan ayaa sheegay inay daba-gal ku hayaan ciddii ka dambaysay qaraxa, isaga oo intaas ku daray in kooxihii qaraxaas soo maleegay aanay gaarin u jeeddadii ay la damacsanaayeen.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa isla markiiba gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay, waxayna xireen jidadka ka ag dhow hoteelka Maka Al-Mukarama.
Filed in: .Warka, Faafiye Latest news. Tags: Qarax Hoteel Makka Al Mukarama.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsFanaanka Maxamed Saleebaan Tubeec oo ku xanuunsan dalka Jarmalka, caawimaadna dalbaday .Somali president accuses world of balking at aid.Adoption of a Somali girl, 3, by lesbians is halted after protests.Xukuumadda oo ka codsatay MSF inay ka noqoto go’aankeeda.Muqdisho: Qarax 3 qof ay ku dhimateen